Revhitiko 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kucheneswa pamaperembudzi (1-32)
Kucheneswa kwedzimba dzine maperembudzi (33-57)
14 Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi, achiti: 2 “Uyu ndiwo unofanira kuva mutemo wemunhu ane maperembudzi pazuva raachanzi akachena, paanofanira kuunzwa kumupristi.+ 3 Mupristi achaenda kunze kwemusasa omuongorora. Kana munhu wacho anga aine maperembudzi apora, 4 mupristi achamuti auye neshiri mbiri mhenyu dzakachena, kabazi kemusidhari, shinda tsvuku, nehisopi zvekuti acheneswe nazvo.+ 5 Mupristi achati imwe shiri iurayirwe mumudziyo wevhu une mvura yakachena. 6 Asi anofanira kutora shiri iya mhenyu pamwe chete nekabazi kemusidhari, neshinda tsvuku, nehisopi, ozvinyika pamwe chete muropa reshiri iya inenge yaurayirwa mumvura yakachena. 7 Achabva arisasa kanomwe pamunhu wacho ari kuzvichenesa pamaperembudzi omuzivisa kuti akachena, uye acharega shiri yacho mhenyu ichienda nesango.+ 8 “Munhu wacho ari kuzvichenesa anofanira kugeza zvipfeko zvake, oveura bvudzi rake rese, ogeza nemvura, uye achava akachena. Kana adaro anogona kudzoka zvake mumusasa, asi achagara kunze kwetende rake kwemazuva manomwe. 9 Pazuva rechinomwe anofanira kuveura bvudzi rake rese remumusoro nendebvu netsiye. Kana aveura bvudzi rake rese, achageza zvipfeko zvake, ogeza muviri, uye achava akachena. 10 “Pazuva rechi8, ngaatore makwayana makono maviri akanaka, negwayana gadzi rimwe chete rakanaka,+ risati rapfuura gore rimwe chete, nezvegumi zvitatu zveefa* yefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti zvive mupiro wezviyo,+ nechiyero cherogi* imwe chete chemafuta;+ 11 uye mupristi anomuti akachena anofanira kuuya nemunhu wacho ari kuzvichenesa, nemipiro yacho, pamberi paJehovha pasuo retende rekusanganira. 12 Mupristi anofanira kutora mumwe mukono wegwayana oubayira kuti uve chibayiro chemhosva+ pamwe chete nechiyero cherogi chemafuta, uye achazvivheyesa semupiro unovheyeswa pamberi paJehovha.+ 13 Achabva aurayira mukono wegwayana panzvimbo inowanzourayirwa chibayiro chechivi nechibayiro chinopiswa,+ munzvimbo tsvene, nekuti chibayiro chemhosva ndechemupristi,+ sezvakangoita chibayiro chechivi. Icho chinhu chitsvenetsvene.+ 14 “Mupristi achabva atora rimwe ropa rechibayiro chemhosva, uye mupristi wacho anofanira kuriisa panzeve yemunhu ari kuzvichenesa yekurudyi nechekuzasi kwayo nepachigunwe chikuru cheruoko rwerudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yekurudyi. 15 Uye mupristi achatora mamwe mafuta ari muchiyero cherogi+ oadururira muruoko rwake rweruboshwe. 16 Mupristi achabva anyika chigunwe chake chekurudyi mumafuta ari muruoko rwake rweruboshwe, osasa mamwe emafuta acho nemunwe wake kanomwe pamberi paJehovha. 17 Mupristi anozoisa mamwe mafuta anenge asara muruoko rwake panzeve yemunhu ari kuzvichenesa yekurudyi nechekuzasi kwayo, nepachigunwe chikuru cheruoko rwake rwerudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yekurudyi, pamusoro peropa rechibayiro chemhosva. 18 Mupristi achaisa mafuta anenge asara muruoko rwake mumusoro memunhu ari kuzvichenesa, uye mupristi achamuyananisira pamberi paJehovha.+ 19 “Mupristi achabayira chibayiro chechivi,+ oyananisira munhu ari kuzvichenesa pakusachena kwake, kana apedza achauraya chibayiro chinopiswa. 20 Uye mupristi achapisira chibayiro chinopiswa nemupiro wezviyo+ pamusoro peatari, uye mupristi achamuyananisira,+ ova akachena.+ 21 “Asi kana ari murombo, asina zvinhu zvinokwana, achatora mukono wegwayana mumwe chete kuti uve chibayiro chemhosva chinovheyeswa, kuti azviyananisire, uye chegumi chimwe cheefa* yefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti uve mupiro wezviyo pamwe chete nechiyero cherogi yemafuta, 22 nenjiva mbiri kana kuti hangaiwa diki mbiri, zvichienderana nekuti anowanawo sei. Imwe yacho ichava yechibayiro chechivi uye imwe yacho ichava yechibayiro chinopiswa.+ 23 Achauya nazvo pazuva rechi8+ kumupristi pasuo retende rekusanganira pamberi paJehovha kuti anzi akachena.+ 24 “Mupristi achatora mukono wegwayana rechibayiro chemhosva+ nechiyero cherogi chemafuta, uye mupristi achazvivheyesa kuti zvive mupiro unovheyeswa pamberi paJehovha.+ 25 Achabva auraya mukono wegwayana wechibayiro chemhosva, uye mupristi achatora rimwe ropa rechibayiro chemhosva, oriisa panzeve yekurudyi yemunhu ari kuzvichenesa nechepazasi payo nepachigunwe chikuru cheruoko rwake rwerudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yekurudyi.+ 26 Mupristi achatora mamwe mafuta oadururira muruoko rwake rweruboshwe,+ 27 obva asasa nechigunwe chake chekurudyi mafuta ari muruoko rwake rweruboshwe kanomwe pamberi paJehovha. 28 Uye mupristi achaisa mamwe mafuta ari muruoko rwake panzeve yemunhu ari kuzvichenesa yekurudyi nechekuzasi kwayo, nepachigunwe chikuru cheruoko rwake rwerudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yekurudyi, munzvimbo dzimwe chetedzo dzaanenge aisa ropa rechibayiro chemhosva. 29 Mupristi achabva aisa mafuta anenge asara muruoko rwake mumusoro memunhu ari kuzvichenesa, kuti amuyananisire pamberi paJehovha. 30 “Achapa imwe yenjiva kana kuti yehangaiwa diki, zvichienderana neyaanowana,+ 31 yaanokwanisa, kuti ive chibayiro chechivi uye imwe yacho ive chibayiro chinopiswa+ pamwe chete nemupiro wezviyo; uye mupristi achayananisira munhu ari kuzvichenesa pamberi paJehovha.+ 32 “Uyu ndiwo mutemo wemunhu anga aine chirwere chemaperembudzi asi asingagoni kuwana zvinhu zvinodiwa kuti azonzi akachena.” 33 Jehovha akabva ati kuna Mozisi naAroni: 34 “Kana masvika kunyika yeKenani,+ yandiri kukupai kuti ive nhaka yenyu,+ uye ndikaisa chirwere chemaperembudzi+ mune imwe imba munyika menyu, 35 muridzi wemba yacho anofanira kubva auya oudza mupristi kuti, ‘Pane zvandaona mumba mangu zvinoita sechirwere chemaperembudzi.’ 36 Mupristi achamuudza kuti afanobvisa zvinhu zvese zviri mumba macho asati auya kuzoongorora, nekuti akasadaro zvinhu zvese zvirimo zvichanzi nemupristi hazvina kuchena; kana adaro mupristi achauya kuzoongorora imba yacho. 37 Achaongorora panenge paine chirwere chacho, uye kana madziro emba yacho aine dzimwe nzvimbo dzakapinda mukati dzine ruvara rwegirini yakachenuruka, kana kuti dzakatsvukuruka uye dzichiratidza kuti dzakadzika, 38 mupristi achabva abuda onomira pasuo reimba yacho, uye achati imba yacho isapindwa kwemazuva manomwe.+ 39 “Mupristi wacho anofanira kuzodzoka pazuva rechinomwe oongorora imba yacho. Kana chirwere chacho chapararira nemadziro emba, 40 mupristi achaita kuti matombo abatira chirwere chacho abviswe okandwa kunze kweguta kunzvimbo isina kuchena. 41 Achabva aita kuti mukati memba yacho muparwe zvakasimba, uye dhaka rinenge rabviswa rinofanira kurasirwa kunze kweguta kunzvimbo isina kuchena. 42 Vanofanira kubva vaisa mamwe matombo munzvimbo dzavabvisa matombo, uye imba yacho inofanira kudzururwa nerimwe dhaka. 43 “Asi kana chirwere chacho chikadzoka, chopararira mumba macho pashure pekubvisa matombo nekuipara nekuidzurura, 44 mupristi achapinda oiongorora. Kana chirwere chacho chapararira nemba yacho, iwo maperembudzi anotapukira+ ari mumba macho. Imba yacho haina kuchena. 45 Anofanira kubva aita kuti imba yacho iputswe uye matombo ayo, matanda ayo, nedhaka rayo rese zvinofanira kutakurwa zvoendeswa kunze kweguta kunzvimbo isina kuchena.+ 46 Asi munhu wese anopinda mumba macho mazuva amunenge makanzi musapindwa+ achava asina kuchena kusvikira manheru;+ 47 uye munhu wese anorara mumba macho anofanira kugeza zvipfeko zvake, uye munhu wese anodyira mumba macho anofanira kugeza zvipfeko zvake. 48 “Asi kana mupristi akauya oona kuti chirwere chacho hachina kupararira nemba pashure pekudzururwa kwayakaitwa, mupristi achabva ati imba yacho yakachena, nekuti chirwere chacho chakapera. 49 Kuti achenese imba yacho pakusachena kwayo,* achatora shiri mbiri, kabazi kemusidhari, shinda tsvuku, nehisopi.+ 50 Anofanira kuurayira shiri imwe mumudziyo wevhu une mvura yakachena. 51 Achabva atora kabazi kemusidhari, hisopi, shinda tsvuku, neshiri iya mhenyu ozvinyika pamwe chete muropa reshiri iya inenge yaurayirwa mumvura yakachena, uye anofanira kurisasa paimba yacho kanomwe.+ 52 Uye achachenesa imba yacho pakusachena kwayo* achishandisa ropa reshiri, mvura yakachena, shiri mhenyu, katanda kemusidhari, hisopi, neshinda tsvuku. 53 Acharega shiri yacho mhenyu ichienda nesango kunze kweguta, oyananisira imba yacho, uye ichava yakachena. 54 “Uyu ndiwo mutemo wenyaya dzese dzine chekuita nemaperembudzi emumusoro kana kuti epandebvu,+ 55 maperembudzi epazvipfeko+ kana kuti emumba,+ 56 uye dzine chekuita nekuzvimba, mhezi, nezvidzvanga,+ 57 unobatsira kuziva kana chinhu chisina kuchena kana kuti chakachena.+ Uyu ndiwo mutemo pamusoro pemaperembudzi.”+
^ Efa uwandu hwaizadza mudziyo wemarita 22. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Rogi yakanga yakaenzana nemarita 0,31. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ ChiHeb., “pachivi.”